खानामा नून छर्केर खाने बानी छ ? होसीयार ! बेफाइदाका सूची यस्ता छन् - Lokpath Lokpath
२०७६, २९ पुष मंगलवार १५:०१
खानामा नून छर्केर खाने बानी छ ? होसीयार ! बेफाइदाका सूची यस्ता छन्
प्रकाशित मिति : २०७६, २९ पुष मंगलवार १५:०१
काठमाडौं – नून (अङ्ग्रेजी salt) मुख्य रुपमा सोडियम क्लोराइडद्वारा बनेको एक प्रकारको खनिज पदार्थ हो । नून अधिक मात्रामा समुद्रमा पाइन्छ, एक लिटर समुद्री पानीमा ३५ ग्रामसम्म नुन पाइन्छ ।
नून मानव जीवनको लागी महत्त्वपूर्ण छ, यो मानव स्वादहरू मध्येको एक हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार एक वयस्क व्यक्तिले २००० मिलिग्राम भन्दा कम नून सेवन गर्नुपर्छ, जुन ५ ग्राम नुन प्रति दिन बराबर हो ।
सोच्नुहोस् त एक दिन नून नखाँदा कस्तो हुन्छ ? हो, आलस्य, प्रेसर कम भएको अनुभूति, रिँगटा छुटेजस्तो, निन्द्रा अल्छी लागेजस्तो । त्यसैले नून सबैका लागि अनिवार्य खाद्यपदार्थ हो । मृत्यु संस्कार कर्ममा नुन १३ दिनसम्म त्यागिन्छ । कसैले ५ दिनमा पनि खान्छन् ।
जिम जानेहरुले पनि ‘सिक्स प्याक’ बनाउने बखत नून खान छोड्छन् । कसैले कम प्रयोग गर्छन् । पक्कै पनि यो स्वादका लागि मात्र नभएर स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तर चिकित्सकका अनुसार यसको मात्रा बढी भएमा स्वास्थ्यमा हानि पुग्छ । सकेसम्म खानामा नूनको मात्रा कम गर्नुपर्छ । मानिसले कुनै खानेकुरामा प्रायःखानेकुरामा नून छर्केर खाने गर्छन् । जुन स्वास्थ्यका लागि खतरनाक मानिन्छ ।
‘अति ले हानी गर्छ’ भनेझैं आवश्यकताभन्दा बढी नून सेवनले कयौं प्रकारका गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछन्।
शरीरमा नूनको मात्रा बढी भएमा पानीको कमी हुने,निश्चित अंगमा पानी जम्मा हुने, शरीरमा सुन्निनेजस्ता समस्या हुन्छ । अझ नून खाँदा मिर्गौलामा पत्थरी उच्च रक्तचाप, मुटुमा समस्या, पेटमा अल्सर, धमनीमा क्षतिलगायतका गम्भीर समस्या समेत हुने गर्छ ।
फास्टफुड र जंकफुडमा नूनको मात्रा धेरै हुने भएकोले यस्ता कुराहरु खान छोड्नुपर्छ ।
सकेसम्म घरमै बनाएको खाना नूनपर्छ । धेरै मसलेदार खाना खानु हुँदैन ।
खानामा धनियाँ, खुर्सानी, जायफल, अदुवा, लसुन, दालचिनी मिसाउनु राम्रो हुन्छ । तर ‘अति ले हानी गर्छ’ भनेझैं आवश्यकताभन्दा बढी नून सेवनले कयौं प्रकारका गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछन्।
एकानब्बे (९१) महत्वपूर्ण टिप्सहरु